Super Diamond Deluxe vanoyeuchidza imi mhedziso hwokusanyara! Waunonzwa sei kuva pakati ikapenya matombo anokosha chipiriso imi akawanda payouts. Runako slots iri yokuti hapana remake kana paradzira zviratidzo. saka, unofanira vavavarire avo mubatanidzwa 3 kana 4, akakutsausa kurutivi takunda. All zvaunoreva ndiko zvishoma nemhanza kuva mambo Super Diamond Deluxe slots Gwenzi.
IGT kana International Gaming Technology ari playing uchitamba mutambo wacho Software kugovera kambani kubva 2006 muzita Gtech vesangano apo Gtech yakawanikwa Lottomatica muna 2006. Kubvira ipapo, kambani iri kuita zvinoshamisa slots mitambo mesmerizing ari playing Vanondida ose zvino uye ipapo. Recently, mu 2015, Kambani akawana zita rayo apo anowanikwa America kambani IGT uye akatora pamusoro zita raro.
Super Diamond Deluxe ari nyore mutambo slots. Musoro wakabatana mabwe anokosha sezvo zviratidzo ndivo korari, jades uye yakanaka cutwork mangoda. Saka Gwenzi kutarisa kwezvokufuka ane yakadzika dzvuku mamiriro nematombo kupenya zvakajeka pamusoro payo. The slots iri kuridzwa ne 5 Gwenzi uye 10 paylines uye hazvisi kuti takunda mutsetse anogona kutanga chete kubva pakutanga vanodzungunyika zvakakodzera. Kunze mavara anokosha, 10, J, Q, K, uye A ndivo yakaderera mari zviratidzo. Hapana remake kana Anoparadzira vari slots ichi rinoumbwa payouts kwauri. The chikuru bhonasi ndiyo mberi jackpot cheshanduro mutambo. wo, sezvo zviratidzo kuti ukapisa murwi pamusoro Gwenzi, zvinoita kuti Unobata makuru slots ichi. Munguva Progressive jackpot dzinoti, hapana wakaiswa kuhwina mubatanidzwa zvinodiwa. Unongofanira vanofanira adzorere Gwenzi nendarama kwezvakamuwira randomly paunenge Tunoruka. Kudzoka kuna mutambi muzana zvakanaka chaizvo sezvo slots inopa payout kuti munenge 96.43% nguva . The vachitamba siyana kunotangira £ 0,20 uye rinokwira £ 500. Kutarira volatility, the game offers somewhere between low to medium volatility, zvisinei, nokuda mberi jackpots, vanhu vane ine ngozi kwokushumba anogonawo vapedze nyota yavo.
Mabviro uye Shandurwa zvave vakadzikama uye zvakanaka dzichienderana musoro Super Diamond Deluxe. IGT ane mamwe cheap car insurance siyana zvokutadza nehochekoche dingindira iri, asi slots uyu umire yakasiyana achitarisa pakururama uye enjoyability pamusoro Gameplay. saka, vanhu vanongoda kuva kunakidzwa nguva vanofanira kuenda nokuda slots ichi.